Dọkịnta Oby Ezekwesiịlị, onye bụbu minista na-ahụ maka mmụta ga-abụ onyeisi kọmitii ahụ. Ndị dịka ọkammụta Benedict Oramah, ọkammụta Pat Utomi na Chief Osita Chidoka so na iri mmadụ asatọ ndị e wepụtara aha ha.
Bido n'abalị nke iri na itoolu ruo n'abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Jenụarị n'afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ (19 – 22 January 2021) ka a ga-anabata ndị kọmiti ahụ n'ụlọ nkwari bụ Golden Tulip (Agulu Lake) nke dị n'Agụlụ. N'ime nnọkọ nke mbụ ahụ ka a ga-anọ kwupụta ma kọwakwa ụdị ọrụ ma ọ bụ ihe ọrụ ha ga-abụ.
Ha na ndị otu gọọmentị Anambara steeti hiwere ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na mgbanwe ọchịchị site na'aka Gọvanọ Willie Obianọ gafee na nke Chukwuma Soludo ga-aga were were n’abalị iri na asaa n'ọnwa Maachị n'afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ (17 March 2022).
Ọ bụ onye enyemaka mgbasa ozi nke aka ga-achị steeti Anambara bụ Joe Anatune binyere aka n’ọkwa a.
A gụọla ya ugboro 305
Kwụsị ịkwatu akpụrụakpụ m, Okorocha